विचित्रको वस्त्रमा छोपिएको ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद - नेपालबहस
हामीले धेरै पटक सुनेको एउटा नीति कथा “बादशाहकाे नयाँ लुगा” अहिले सान्दर्भिक भएको छ । कथा अनुसार , “एकजना महाराज पोशाकका सौकिन । उनी नयाँ नयाँ वस्त्र लगाउन मरिहत्ते गर्थे । सधैं उनलाई नयाँ नयाँ पोशाक लगाउने हुटहुटीले सताउँथ्यो । जति सिलाएपनि चित्त नबुझ्ने भोलिपल्टै नयाँ चाहिने । मन्त्रीगण सधैं तनावमा हुने अवस्था आईलाग्यो । जतिसुकै नयाँ र राम्रो पोशाक तयार गरेपनि राजन असन्तुष्ट । दिक्दार भएर महामन्त्रीले एउटा जुक्ति लगाए । महाराजालाई अब बस्त्रका नाममा नांगो घुमाउने । नभन्दै भोलिपल्ट महामन्त्रीले कहलिएको दर्जीलाई बोलाएर महाराजालाई विचित्रको वस्त्र सिलाउन भने । दर्जीले कसैले तयार नगरेको विचित्रको पोशाक सिलाएर ल्याए । महामन्त्रीले उसलाई बिदा गरे ।
नभन्दै महाराजको सवारी चल्यो । नगरवासीले वाह वाही गरि महाराजलाई स्वागत गरे । कतिले त नारा नै लगाए – महाराजको नयाँ पोशाक विचित्रको छ । वाह कस्तो आकर्षक । महाराज दंग पर्दै अघि बढ्दै थिए । बाटोमा उभिएको एउटा बालकले चिच्याएर भन्यो – हाम्रा राजा त नांगै छन् । अनि महाराज छाँगाबाट खसे ।
अनि भारदारी सभामा सबैलाई डाकेर एउटा रित्तो झोलाबाट केही निकालेजस्तो गरे । राजाले सोधे – खै त पोशाक ? महामन्त्रीले जवाफ दिए – सरकार बडो आकर्षक पोशाक छ । यी हेरिबक्योस् त । महाराजाले केही देखेनन् । अनि सोधे अर्का मन्त्रीलाई कस्तो पोशाक छ ? अर्काे मन्त्रीले पनि बढो आकर्षक भएको बतायो । महाराजालाई चित्त बुझेन । कान्छी महारानीलाई बोलाएर सोधे यो पोशाक कस्तो लाग्यो ? महारानीले कुरा बुझिन् र भनिन् – गज्जब छ सरकार ।
अनि महाराजाले त्यो पोशाक लगाए । विचित्रको पोशाक । सबैजना राम्रो भनेर तारिफ गर्छन् । तर महाराज भने कही देख्दैन् । उनले आफ्ना चाकरले भनेको पत्याए । अनि पोशाक लगाएर शहर परिक्रमा गर्ने निधो भयो । उर्दी जारी गरियो – महाराजले विचित्रको पोशाक पहिरिनु भएको छ । सबैले ताली लगाएर जयजयकार गरौं । नभन्दै महाराजको सवारी चल्यो । नगरवासीले वाह वाही गरि महाराजलाई स्वागत गरे । कतिले त नारा नै लगाए – महाराजको नयाँ पोशाक विचित्रको छ । वाह कस्तो आकर्षक । महाराज दंग पर्दै अघि बढ्दै थिए । बाटोमा उभिएको एउटा बालकले चिच्याएर भन्यो – हाम्रा राजा त नांगै छन् । अनि महाराज छाँगाबाट खसे ।”
आसेपासे भन्छन् – राजधानीमा धुलो धुँवा सकियो । तपाई आएपछि कसैले मास्क लगाउनु परेको छैन । तुरुन्तै उनले भाषण ठोके – अब काठमाडौं धूलो धुँवामुक्त भयो । लगत्तै चर्काे आलोचना भयो । मूलधारका अखबारहरुले जताततै नाक छोपेर हिंड्नुपरेको तस्विरसहितको समाचार छापे । चाकडीबाज मण्डलीले ओलीलाई भने – यो त तपाईलाई असफल देखाउन विरोधीले चलेको चाल हो । नभन्दै भाषण ढोकी दिए – मलाई गाली गर्नका लागि प्रायोजित रुपमा यस्ता समाचार र तस्बिर छापिएका हुन् ।
बल्ल बुझे उनले कथाको अन्तर्य । त्यसपछि महाराजले कहिल्यै नयाँ पोशाकको चाह गरेनन् । साथै आफू नांगो हिंड्नुका पछाडि चाकडीबाजको कुरा प्रिय लाग्ने स्वभाव रहेको बुझे । त्यसपछि उनले कहिल्यै पनि आफ्नो तारिफ नगर्न आदेश दिए । अहिले ठीक त्यस्तै अवस्था आइपरेको छ – दुई तिहाईका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई । आसेपासे भन्छन् – राजधानीमा धुलो धुँवा सकियो । तपाई आएपछि कसैले मास्क लगाउनु परेको छैन । तुरुन्तै उनले भाषण ठोके – अब काठमाडौं धूलो धुँवामुक्त भयो । लगत्तै चर्काे आलोचना भयो । मूलधारका अखबारहरुले जताततै नाक छोपेर हिंड्नुपरेको तस्विरसहितको समाचार छापे । चाकडीबाज मण्डलीले ओलीलाई भने – यो त तपाईलाई असफल देखाउन विरोधीले चलेको चाल हो । नभन्दै भाषण ढोकी दिए – मलाई गाली गर्नका लागि प्रायोजित रुपमा यस्ता समाचार र तस्बिर छापिएका हुन् ।
दुई तिहाईको सत्ता उन्मादले चूर भएका ओलीलाई कसैले भनिदियो । यहाँ पत्रकारहरु तपाईंलाई सिध्याउन लागेका छन् । यिनलाई यसरी छाडा छाड्ने हो भने वित्याँसै पर्छ । त्यसपछि उनले फरमान जारी गरिदिए – बढ्ता बोले भने थुन्ने गरी कानून बनाई दिनू । आदेशको पालना गर्न उनका कुरुवा चाकर खडा भए गोकुल बाँस्कोटा । अनि सुरु भयो पत्रकार ठेगान लाउने उपक्रम । पहिला ल्याइयो मिडिया काउन्सिल विधेयक । एक वर्ष थुन्ने र १० लाख रुपैयाँ तिराउने प्रावधान ल्याइयो । सर्बत्र चर्काे विरोध भयो । तर ओलीका वरिपरिका चाकरहरु भन्थे – यी दुई चार जना कराएर केही हुन्न । झुक्ने काम छैन । दुईचार दिनमा गल्छन् । केही फरक पर्दैन । ओली कड्किएर बोले – दुई तिहाईको सरकारसँग ब्याक गियर छैन । काग कराउँदै गर्छ , हात्ती लम्कँदै गर्छ ।
ओलीलाई चाकरहरु भन्छन् – सरकार ढाल्ने चाला हो । पार्टी भित्रका विरोधी नै सक्रिय छन् । पछि हट्ने कुरै छैन । ओली पनि हो मा हो मिलाइरहेका छन् । यही रुपमा ओली सरकार लामो जान सक्ने देखिंदैन । लैनचौरको चाकडीका भरमा अब सत्ता टिक्न गाह्रो छ । अब लैनचौरलाई अर्काे खेताला चाहिएको छ । त्यसैले नक्कली राष्ट्रवादको चोला निकाल्न उ नै सक्रिय छ ।
अनि फेरि ल्याइयो – सूचना प्रविधि विधेयक । यसमा त सर्वसाधारणलाई समेत १५ वर्षसम्म थुन्ने गरी प्रावधान राखियो । पार्टी भित्रैबाट चर्काे विरोध भयो । चाकडीबाजको तर्क थियो – यो तपाईलाई बद्नाम गर्न पार्टी भित्रैकै विरोधीको चाला हो । हजूरलाई र सम्मानित पदमा आसिनलाई जोडेर बद्नाम गर्न चाहनेको विरोधको अर्थ छैन । यही भाषा र शैलीमा बाँस्कोटाले संसदीय समितिमा एउटा भिडियो प्रस्तुत गरे । राष्ट्रपति र ओलीलाई जोडेर पोष्ट गरिएको प्यारोडी । साथै उनले यसरी बद्नाम गर्न खोज्नेलाई दुई तिहाई सरकारले छुट दिन नसक्ने हुँकार गरे । ओली पनि दंग भए ।
त्यसपछि उनको नक्कली राष्ट्रवादको उछित्तो काढ्ने गरी आईफा काण्ड आयो । ०७२ असोज यता भयङ्कर राष्ट्रवादी बनेका ओलीले आफ्नो असली अनुहार आईफा प्रकरणमा देखाइदिए । हिन्दी भाषा, संस्कृतिको प्रबद्र्धन गर्न उनले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराए – आईफा नेपालमा गर्ने । यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ अनुदानसमेत दिने । अनि त धेरैलाई ओलीको लैनचौरसँगको साँठगाँठ थाहा भयो । धेरैतिरबाट विरोध भएपछि तत्काल निणर्य स्थगित भएको छ । तर आउरेबाउरे भन्दै छन् – नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउन भएपनि आईफा गर्नुपर्छ । यो पनि विपक्षीको चाल हो । भ्रमण वर्ष असफल पार्न यसको विरोध गरिएको रिपोर्टिङ ओलीलाई गरिएको छ । त्यसैले होला, शनिबारको नेकपा संसदीय बैठकमा ओलीले भने – आईफा हाल स्थगन भएको हो , उपयुक्त समयमा उचित निर्णय लिइने छ ।
कसैले ओलीलाई सुझाए राष्ट्रवादी छविमा क्षति पुगेजस्तो छ । अनि मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर भारतबाट आयात हुने सबै हरिया तरकारी र फलफुलको कीटनाशक औषधिको मात्रा परिक्षण गर्ने निर्णय गरियो । यति गर्दा गुमेको राष्ट्रवादी शाख फर्कने सल्लाह तिनै चाकरले दिए । त्यसै गरियो । तर निर्णय भएको दुई साता बितेको छैन मन्त्रिपरिषले निर्णय ग¥यो – हाललाई बिना अवरोध भित्रन दिने । ख्वामितको आदेश टार्नु ओलीको वसमा थिएन । हाललाई परिक्षण गर्ने औजार नभएकाले निर्णय फिर्ता लिने तर्कमा ओलीको राष्ट्रवाद अडिएको छ ।
सत्तामा पुगेपछि जो पनि अन्धो हुन्छ भन्ने कुरा ओलीको पछिल्लो चरित्रबाटै प्रष्टिएको छ । अब ओली पनि माथि चर्चा गरिएका महाराजको जस्तो अवस्थामा पुगेका छन् । चाकरहरुको बन्दी बनेका छन् । तर ओलीले यति बुझिसक्दा बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको हुन्छ ।
आखिर लैनचौरको सच्चा आदेशपालक न हुन् ओली । यसको चर्काे आलोचना भयो । शनिबारको संसदीय दलको वैठकमा सांसदले प्रश्न उठाए । ओली चर्किए – पूर्वाधार नभइकन कसरी परीक्षण गर्ने ? जबकी नेपाली व्यावसायीले अलैंची , अदुवा निर्यात गर्दा पटना र कलकत्ता पुगेर परीक्षण गराईरहेका छन् । एकजना चाकर चलायमान भए । ट्वीटरमा लेखे– भनिन्छ छौंडाहरु आफैं चलबलाउँदैनन् , कसैले छाड्छन् कसैले दुख दिन्छन् । यी छौंडाहरु आफैं चलायमान हुन् की कसैले छाडेका हुन् ? ओली भजनमण्डलीका नाईके विष्णु रिमालले यस्तो ट्वीट गरेपछि नेकपा भित्रै खैलाबैला भएको छ ।
यसरी बद्नामी बढ्दै गएपछि ओलीको विकल्पमा अर्काे गोठालो ल्याउने लैनचौरको आकांक्षा हो । सत्तामा पुगेपछि जो पनि अन्धो हुन्छ भन्ने कुरा ओलीको पछिल्लो चरित्रबाटै प्रष्टिएको छ । अब ओली पनि माथि चर्चा गरिएका महाराजको जस्तो अवस्थामा पुगेका छन् । चाकरहरुको बन्दी बनेका छन् । तर ओलीले यति बुझिसक्दा बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको हुन्छ ।
बादशाहकाे नयाँ लुगा
अघिल्लो लेखसांसद गगन थापाले गरे ओली सरकारको कडा आलोचना
अर्को लेखसिटिजन्स बैंकले सहयोगी विकाश बैंकलाई एक्वायर गर्ने
प्रधानमन्त्रीले अचानक किन मागे आफ्ना सल्लाहकार र कर्मचारीको राजीनामा !
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० : होटल क्षेत्रमा पाँच अर्ब ७७ करोड वैदेशिक लगानी वृद्धि
बेलायती संसद्मा नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचार गरिँदै, विश्वकै ठूलो ‘ट्राभल सो’मा उपस्थित हुन मन्त्री भट्टराई बेलायतमा
कम्युनिष्ट कार्यकर्ता भर्ति हुँदैछन् प्रदेश प्रमुखमा, को को हुन् ती ?
अचानक हटाइए सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु
साँझ साढे ६ बजे फेरि क्याबिनेट बस्दै
मेडिकल काउन्सिलमा डा. कोइराला